NYI LYNN SECK 18+ DEN: February 2006
Posted by NLS at 2/28/2006 09:23:00 PM 1 comment Links to this post
ကိုနေမျိုးဆေးဟာ ကျွန်တှော အနှစ်သက်ဆုံး မြန်မာ အနုပညာ ရှင်တွေ ထဲက တစ်ယောက်ပါ။ သူ့ စိတ်ကူးတွေ လက်ရာတွေက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ အလွန် ခေတ်မီပါတယ်။ သူ့ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ သူ့ ပန်းချီ လက်ရာတွေ နဲ့ တခြား အနုပညာ လက်ရာတွေ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အထက်ကလို လှတပတ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ အီးကဒ် လေးများလည်း အချင်းချင်း ပို့နိုင်ပါတယ်။ မန်ဘာ ဝင်ဖို့တော့ လိုပါမယ်။ ( Website Here )
Tags: Myanmar Artist
Ecard , Website , Nay Myo Say
Posted by NLS at 2/28/2006 08:51:00 PM0comments Links to this post
This is something strange Land Mark that I found on the Moon, using Nasa World Wind. It might be very deep pot-hole, depression in the ground. I think, may be, onceatime this area was hitted by some kind of crashing planet or commet. Tags : Moon , Nasa World Wind , Knowledge
Posted by NLS at 2/28/2006 06:12:00 PM0comments Links to this post
ဂူဂယ်လ်ရဲ့ GoogleEarth လိုပဲ နာဆာကနေ Nasa World Wind ဆိုတာကို ထုတ်လိုက်ပါပြီ။ နမူနာ ပုံစံများ အရတော့ တချို့ နေရာတွေမှာ ဂူဂယ်လ်အတ်ထ် ထက် ပိုပြီး ကြည်လင် ပြတ်သားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အရောင်အသွေး မှာတော့ ကျွန်တှောက ဂူဂယ်လ်ကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။ နာဆာမှာ ပိုကောင်းတာက လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ရာသီဥတု အခြေအနေကို တွေ့နိုင်တာပါ။ ဘယ်နေရာမှာ မုန်တိုင်းကျနေတယ်၊ လေထုဖိအား ကျနေတယ် တိမ်ထူထပ် နေတယ် ဆိုတာမျိုးကို ချက်ခြင်း သိနိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့ချင်းစီရဲ့ လေထု စိုထိုင်းစ၊ မိုးရေချိန်၊ အပူချိန် စတာတွေ ကိုလည်း အချိန်မရွေး ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ သူ့အတွက် လိုအပ်တဲ့ System Requirement ဖြစ်ပါတယ်။
Pentium3, 1 GHz
Ram 256 MHz
Check Reviews and Download(54.1Mb) here : World Wind
Tags : Google Earth , Nasa World Wind , Software , Technology
Posted by NLS at 2/28/2006 03:25:00 PM0comments Links to this post
Singapore graduates are creating new records. They are getting jobs faster and earning higher salaries than their counterparts in the previous three years. And they're receiving multiple job offers. According toaNational University of Singapore survey, nearly all (98%) its graduates found jobs within6months. Eight in 10 did it in less than three months. Students who have been on the NUS Overseas Colleges Programme are paid an average of $2,900, $400 more compared to other NUS graduates. NUS also plans to further enhance its multi-disciplinary academic environment by offering more double degree programmes.
The university is ranked 22nd in the world by Times Higher Education Supplement.
Posted by NLS at 2/28/2006 03:11:00 PM0comments Links to this post
ကျွန်တှော အွန်လိုင်း စသုံးပြီး စာတွေ စရေးဖြစ်ကတည်းက အခုချိန်အထိ သူငယ်ချင်း အနည်းအကျဉ်း ရခဲ့တယ်။ သာမဏေန သာမဏေနော၊ ဂုဏေနဂုဏော လို့ပဲ ပြောရမလား မသိဘူး။ စာပေကို မြတ်နိုးသူ အချင်းချင်း ၊ ဂီတကို မြတ်နိုးသူ အချင်းချင်း ခင်မင်ခွင့် ရခဲ့တယ်။ သူတို့တွေနဲ့ စကားပြောရတာ ပေါင်းရတာ သိပ်ကောင်းတယ်။ အယူအဆ မတူတာ တချို့ ရှိပေမယ့် ကျွန်တှောတို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မပုတ်ခတ်ကြဘူး။ နားလည်ကြတယ်။ အချင်းချင်း အားပေးကြတယ်။ အများကြီး ပြောစရာ မလိုဘဲ နဲနဲ ပြောရုံနဲ့ နားလည်ကြတယ်။
ပထမဆုံး သိတဲ့ တစ်ယောက်က ဒီအယ်လ် လို့ခှေါတဲ့ ကဗျာရေးကောင်းတဲ့ ညီမငယ် တစ်ယောက်ပါ။ သူ့ကို အစကဆို မိန်းခလေးမှန်း မသိပါဘူး။ ကျွန်တှောလည်း မမေးမိဘူး။ တှောတှောကြာမှ သိတာပါ။ သူနဲ့ ကျွန်တှောနဲ့က မှောဒန် ကဗျာကို နှစ်သက်ပုံခြင်း မြင်ပုံခြင်း တူပါတယ်။ ကျွန်တှောတို့ အချင်းချင်း အပြုသဘော ဝေဖန်ကြတယ်။ ထောက်ပြကြတယ်။ ပန့်ခ်တွေကို နှစ်သက်တဲ့ death-metal တေးဂီတကို နှစ်သက်တဲ့ သူမဟာ အပြင်မှာ တွေ့ရင် ထင်ရက်စရာ မရှိအောင်ကို စကားနည်း အေးဆေးပါတယ်။ ကျွန်တှော တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်း မိန်းခလေး တွေထဲမှာ ဒီအယ်လ်ဟာ အကောင်းဆုံး မှောဒန်ကဗျာ ရေးနိုင်သူ တွေးခှေါတတ်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
နောက်တစ်ယောက်က ဒီအယ်လ့်အကို ခက်ဇန်ရဲပါ။ သူနဲ့ ကျွန်တှောက ရွယ်တူတွေပါ။ သူ့ပထမဆုံး ကဗျာလေး ပလန်းနက်မှာ စတွေ့တော့ ချက်ခြင်းပဲ ကျွန်တှောတို့ လိုင်းတူတယ် ဆိုတာ သိခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်း သူနဲ့ ကျွန်တှော မက်ဆင်ဂျာမှာ စကားပြော ဖြစ်ကြတယ်။ ရန်ကုန်မှာ တွေ့ဖြစ်ကြတယ်။ ခက်ဇန်ရဲဟာလည်း ကျွန်တှော့လိုပဲ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ သီချင်းတွေရေး သီချင်းတွေလည်း ဆိုတယ်။ သူ့အသံဟာ တှောတှော ကောင်းပါတယ်။ Own Tune ကို ထိထိမိမိ ရေးနိုင် ဆိုနိုင်တယ်။ သူ့အခွေကို လုပ်နေတာ ကြာပါပြီ။ နောက်ဆုံး မြန်မာပြည် ကျွန်တှော ရောက်တော့ စတီရီယိုမှာ သူနဲ့ တွေ့ဖြစ်သေးတယ်။ သီချင်းတွေ မစ်စ်ဒေါင်း လုပ်နေပြီ။ လင်းဆက်ရာ ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တှောနဲ့ က အဲဒါကြောင့်မို့ ပေါင်းလို့ ရတာလို့ သူမကြာခဏ ပြောတတ်ပါတယ်။ သူအောင်မြင်မယ်လို့ ကျွန်တှော ယုံကြည်ထားတယ်။ သူတို့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်က ကျွန်တှော့အတွက် အမှတ်တရ ကဗျာ ရေးပေးထားတာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တှော့ ကဗျာ စာအုပ်လေးထဲမှာ ဖှောပြထားပါတယ်။ (Click) ကျွန်တှောတို့ နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ကဗျာစာအုပ် ထုတ်ဖို့လည်း တိုင်ပင်ထား သေးတယ်။
Posted by NLS at 2/28/2006 02:10:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/28/2006 01:30:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/28/2006 01:14:00 AM0comments Links to this post
မနေ့က MRTV-3 မှာ ဒါရိုက်တာ ဦးကြည်စိုးထွန်းက ဘုရင့်နောင် အကြောင်းကို ယိုးဒယားထက် သာအောင် ရိုက်ချင်တယ် ဆိုပြီးပြောနေတာကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ဘုရားရေ။ နောက်ထပ် မြန်မာပြည်ကို သိက်ခါ ချမယ့် ကားတစ်ကား လာဦးမှာလား မသိဘူး။ ဦးတည်ချက်ကလည်း အံ့ဩစရာဗျ။ ဆူရိယိုထိုင်းမှာ တပင်ရွှေထီးကို ရိုက်ထားတာ ကာရိုက်တာ မပီပြင်လို့၊ ဗမာတွေကို နှိမ်ထားလို့လို့ ဆိုပါတယ်။ မဟုတ်သေးဘူး။ အနုပညာ သမားဟာ အနုပညာ တစ်ခုကို ဘာအတွက် လုပ်မှာလည်း။ မှန်တယ် အဲဒီကားမှာ တပင်ရွှေထီး ပုံစံက အခြောက်လို ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကားဟာ ဗမာပြည် အရေးက နည်းနည်း၊ သူတို့ ပြည်တွင်းရေးကို အဓိကထား ရိုက်ထားတာ ဖြစ်တယ်။ ဇာတ်သဘောအရ ဗမာပြည်က ပါလာရတယ်။ အဲဒီ အမ်အာတီဗီ ကလူတွေ ဆွေးနွေးနေကြတာက သူတို့ ရိုက်ချင်တဲ့ ဘုရင့်နောင် ဇာတ်ကားကိုသာ ရိုက်မယ်ဆို ယိုးဒယားကို တိုက်တာ အောင်မြင်တာကို အပီအပြင် ရိုက်မယ်တဲ့ ခင်ဗျား။ ကျွန်တှောဖြင့် အံ့ဩလို့ မဆုံးဘူး။ ဘာလို့ မြန်မာတွေ ခေတ်ဟောင်းကို တမ်းတ နေကြတာလည်း။ ဘာလို့ သူများ နိုင်ငံကို ကျူးကျှောတာကို ဂုဏ်ယူ နေကြတာလည်း။ ကိုယ့်ကျတော့ အဂဿငလိပ် လက်အောက် ကျခဲ့တာကို တောက်တခေါက်ခေါက် ပြောနေကြတယ်။ ကျူးကျှောသူ အခြင်းခြင်း ဗမာက ယိုးဒယားကို ကာလကြာအောင် မထိန်းသိမ်း နိုင်ခဲ့ဘူး။ အဂဿငလိပ်တွေကတော့ မြန်မာပြည်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ရှင်းရှင်းလေးပါ။ ကျွန်တှောတို့ အဲဒါတွေ အားလုံးကို မေ့လိုက်သင့်ပြီ။ သူများ တိုင်းပြည်တွေလို အဘက်ဘက်က တိုးတက်အောင် လုပ်ဖို့ ကြိုးစားသင့်နေပြီ။ အလကားနေရင်း သမိုင်းတွေ ပြန်နှူးပြီး စားမြုံ့ပြန် ကျေနပ်နေရင်တော့ အောက်ကျနောက်ကျ ဖြစ်နေဦးမှာ အသေအချာပဲ။ ရိုက်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုကားမျိုးကို။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ဦးတည်ချက်ကတော့ အနုပညာ မမြောက်ပါဘူးလို့ မြင်မိတယ်။ ဘုရင့်နောင် မင်းတရားကြီးရဲ့ လက်ရုံးရည် နှလုံးရည်ကို မြန်မာပြည်ထဲက အကြောင်းတွေပဲ ရိုက်ဦး ကုန်မှာကို မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တှောတို့က Documentary Film ကို ကြည့်ရမှာလား Art ကို ကြည့်ရမှာလား။ ပရိသတ်ကို ဒါမျိုးနဲ့ မလှည့်ဖျား သင့်ပါဘူး။
Posted by NLS at 2/28/2006 12:56:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/28/2006 12:33:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/27/2006 06:37:00 PM0comments Links to this post
ဒီနေ့ အန်တီ တစ်ယောက်ကို လက်ဆောင် ပေးဖို့ World Architectures ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေး သွားဝယ်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ စာအုပ်ထဲမှာ ပုဂံ အကြောင်း ပါလာလို့ ဖတ်ရင်းနဲ့ Wiki မှာ သွားရှာကြည့်တယ်။ အဲဒီအခါ ဒီစာပိုဒ်လေးကို တွေ့ပါတယ်။
UNESCO has long tried unsuccessfully to designate Bagan asaWorld Heritage Site. However, Bagan's chance of becomingaWorld Heritage Site is now slim, as the government has renovated many temples and pagodas without taking into consideration their former architectural styles.
ကျွန်တှောလည်း ထေရဝါဒ ဗုဒဿဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ပုဂံ ဘုရားတွေ ပြင်တဲ့ ကိစ ကိုတော့ ကန့်ကွက်ချင်တယ်။ ကျွန်တှော့ မျက်လုံးထဲမှာ ပုဂံဟာ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ် လက်ရာတွေပဲ။ ဘုရား ဆိုတာထက် အမွေအနှစ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်တွေဟာ တန်ဖိုးရှိတယ်။ အဲဒီ အနုပညာ လက်ရာတွေကို သမရိုးကျ ပြုပြင် ပြင်ဆင် ခြင်းဟာ ဖျက်ဆီးရာ ရောက်ပါတယ်။ ပြင်ဆင်သူတွေရဲ့ စေတနာကို အသိအမှတ် ပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ဘာလုပ်နေတယ် ဆိုတာ သူတို့ သိကြရဲ့လား ဆိုတာကိုတော့ သံသယ ဖြစ်မိတယ်။ တစ်ခါက လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီ ရဲ့ မိုနာလီဆာ ပန်းချီကားကို ပြင်ဆင်တာကို ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ရှေးဟောင်း သုတေသန ပညာရှင်တွေ၊ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်တွေ ပေါင်းစည်း တိုင်ပင်ပြီးမှ စနစ်တကျ ဒီပန်းချီကားကို သန့်စင် မွမ်းမံခြင်း လုပ်ကြတာပါ။ ကျွန်တှောတို့ ပုဂံ ဘုရားတွေကို ပြုပြင်လိုက်တာ လွန်စွာ နှမြောဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ထီးတှော ပြိုကျနေပါစေ၊ ငုံးတိ ဖြစ်နေတဲ့ စေတီ ဖြစ်ပါစေ. အဲဒါဟာ သမိုင်းဝင် အနုပညာပါ။ အဲဒါကို ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ပြင်ဆင်တာဟာ တန်ဖိုးကျအောင် လုပ်တာပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် ပုဂံ ဘုရားတွေ ပြင်တယ် ဆိုတိုင်း ကျွန်တှော ဘယ်တုန်းကမှ သာဓု မခှေါခဲ့ဘူး။ မချီးကျူးခဲ့ဘူး။ တောက်တခေါက် ခေါက်နဲ့ မြန်မာတွေ အသိဉာဏ်မဲ့တာကို ဝမ်းနည်း နေခဲ့မိတယ်။ ရှေးဟောင်း အနုပညာကို ပြင်ဆင်လိုက်ရင် ရှေးဟောင်း မဟုတ်တော့ဘူး။ တကယ်ဆို ယူနက်စကို အမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရေးလို အဖွဲ့အစည်းတွေ အကူအညီကို ယူပြီး ပြင်ဆင် သင့်ပါတယ်။ အခုတော့ သာမန် ပန်းရံ သမားတွေ လက်ရာနဲ့ အနုပညာတွေ အများကြီး တန်ဖိုးမဲ့ခဲ့ရပြီ။ ကျွန်တှောကတော့ မျက်လုံးတွေကို ခွဲထားပါတယ်။ ဘာသာရေးဟာ ဘာသာရေးပါ။ အနုပညာဟာ အနုပညာပါ။ ပုဂံကို ကျွန်တှောက အနုပညာ အမြင်နဲ့ပဲ မြင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
Tags : Idea , Bagan
Posted by NLS at 2/27/2006 05:47:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/26/2006 05:30:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/26/2006 02:01:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/26/2006 01:25:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/25/2006 05:28:00 AM0comments Links to this post
ငါ့စိတ်ထဲကို အဲ့ဒီ မျက်ရည်လာရိုက်တယ်
အဂဿငလန်က ဘရာဇီးကို ၄း၂ နဲ့ရှုံးတယ်
ဒီနေရာမှာ ဘာသာဗေဒ မလိုဘူးဆိုတာကို
Tags : KZY , Poem , Friend
Posted by NLS at 2/25/2006 04:22:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/25/2006 03:57:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/25/2006 02:25:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/24/2006 08:36:00 PM0comments Links to this post
တစ်နေ့ တစ်နေ့ အားအားယားယား ပို့နေကြတဲ့ Chain Letter တွေကို သိပ်စိတ်တို နေမိတယ်။ အိပ်ယာထလို့ အီးမေးလ် ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီ Spam တွေနဲ့ တိုးတော့တာပါပဲ။ မြန်မာတွေ သိပ်အားယား နေကြလား မသိဘူး။ အဆိုးဆုံးက ပလန်းနက်မှာ ခင်လာတဲ့ သူတွေပဲ။ ကလေးငိုတဲ့ ပုံတွေလည်းပို့၊ ဒီစာကို ၁၅ စောင်ဝေရင် ထူးခြားမယ် ဆိုတာတွေလည်း ပို့၊ သတိရတယ် ဆိုတာကိုလည်း လူ၁၀၀ လောက်ကို ပို့၊ အဲဒီ လူတွေက ထပ်ပြီး တဆင့် ပြန်ပို့ နဲ့ စိတ်တှောတှော ဆိုးလာမိတယ်။ မပို့ပါနဲ့လို့ အခါခါ တောင်းပန်လည်း မရဘူး။ မည်းမည်း မြင်တိုင်း ထိုးဟောင်သလို လိပ်စာတွေ့တာနဲ့ လိုက်ပို့ တော့တာပဲ။ မဖတ်ပေမယ့် ဖျက်နေရတာကိုက အလုပ်တစ်လုပ်။ နောက်ဆုံး တင်းလာလို့ အီးမေလ်း တွေကို ဘန်းပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒီလို ကောင်တွေကြောင့် တခြား သူငယ်ချင်း တွေနဲ့လည်း မျက်နှာ ပျက်ရတယ်။ ဒါတောင် ကျွန်တှောတို့က အကန့်အသတ်မဲ့ သုံးနေတော့ ပြသနာ မရှိလှဘူး။ မြန်မာမေးလ် တွေ သုံးနေတဲ့ သူတွေဆို တှောတှောလေး စိတ်ညစ်ကြမှာပဲ။ ဒီ Spam Mail တွေကြောင့် တခြားအရေးကြီးတဲ့ မေးလ်တွေ ဝင်မရ ဖြစ်မှာပဲ။ အဲဒါကို အဲဒီကောင်တွေ နားလည်ဖို့ ကောင်းတယ်။ မရှိတာထက် မသိတာခက် ဆိုတဲ့ စကားဟာ သိပ်မှန်တာပဲ။ ကျွန်တှောတို့လည်း ပို့ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ သူအချင်းချင်းဆို ထူးဆန်းတဲ့ ပုံကလေးတွေ၊ သီချင်းတွေ၊ ကဗျာတွေ၊ စာတွေ ပို့ကြတယ်။ တခါတလေ သီချင်းတွေ အီးဘွခ်တွေ ဆို ဝေမျှကြတယ်။ တှောပြီပေါ့။ အခုတော့ သိသိ မသိသိ ရမ်းသမ်းပြီး ကြိုက်မှန်း မသိ၊ မကြိုက်မှန်း မသိ ပို့တာတွေကတော့ လွန်ပါတယ်။ ရူးနေကြလား မသိဘူး။
Posted by NLS at 2/24/2006 08:16:00 PM0comments Links to this post
Tags: Aishwarya Rai, Nyi Lynn Seck, Design
Posted by NLS at 2/24/2006 06:58:00 AM0comments Links to this post
Essay , Download , Idea
Posted by NLS at 2/24/2006 04:50:00 AM0comments Links to this post
ကျွန်တှော ဒီနေ့ အိပ်ယာက နိုးတော့ နေ့လည် ၃ နာရီ။ အိပ်မက်တွေ ကလည်း သိပ်မကောင်း လှဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ စိတ်တွေ ကျဉ်းကျပ်လာရင် ရေတွေကို မက်နေမှန်း မသိပါဘူး။ ကျွန်တှော့ အိပ်မက်တွေမှာ ပင်လယ်ပြင် ကြီးတွေ၊ သဘေဿငာတွေ၊ တောင်တန်းတွေ အမြဲပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ သံမှိုလို စွဲနေတယ် ထင်ပါရဲ့။ ပျင်းပျင်း ရှိတာနဲ့ စာအုပ် တစ်အုပ် ဖတ်ဖြစ်တယ်။ အေးသိန်း ရေးတဲ့ ရတနာဂီရိမှ သီပေါမင်း ဆိုတဲ့ စာအုပ်။ အကြောင်း အရာကတော့ သိပ်ထူးထူး ခြားခြား သိပ်မဟုတ်ပါဘူး။ သဘေဿငာသား ဘဝနဲ့ သီပေါမင်း နေခဲ့တဲ့ ရတနာ ဂီရိကို အရောက် သွားကြည့်တဲ့ အကြောင်းပါ။ သူ့အတွက် အမှာစာ ရေးပေးထားတဲ့ လူတွေက တှောတှော ချီးမွမ်း ထားပါတယ်။ အခက်အခဲတွေ ကြားက မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ သွားတဲ့သူတို့၊ ကိုယ့်ဘုရင်ကို ချစ်တဲ့သူတို့ စုံနေတာပါပဲ။ ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်တှော အညွှန်းတွေကို ဖတ်ပြီး အတှောလေး ရယ်ချင် သွားပါတယ်။ အိုကေပေါ့။ ဘယ်လိုများ အခက်ခဲတွေ ကြားက စွန့်စွန့်စားစား သွားခဲ့ သလဲပေါ့။ ဖြစ်ရလေ။ ဖတ်မိတဲ့ အချိန်တွေ နှမြောသွားတယ်။ ဦးအေးသိန်းရယ်။ သဘေဿငာသား ဘဝကို သိတဲ့လူတိုင်း ထိုင်ရယ်နေတော့မှာပဲ။ သူလိုက်တာ Cargo-Ship ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ သဘေဿငာတွေက ဆိပ်ကမ်း တစ်ခုမှာ ကပ်ရင် ၇ ရက်ကနေ ၁၀ လောက် ကြာတတ်တယ်။ ကုန်တင် ကုန်ချ ကလည်း အေးဆေး။ ဘာမှ ပူစရာကို မလိုဘူး။ သူ့ကို တရုတ် Chief-Officer ကနေ ဒီခရီးကို သွားချင်ရင် သွားပါ။ ဖြစ်လာသမျှ ပြသနာကို သူတာဝန် မယူနိုင်ဘူး၊ ကိုယ့်ဘာသာ ခံရမယ် ပြောလို့ ဇာတိမာန် နဲ့ ခံပြင်း မိသတဲ့။ ဖြစ်ရလေ။ ကျွန်တှောသာ Chief Officer ဆိုလည်း ပြောမှာဘဲ ခင်ဗျ။ အမှန်ဆို ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်သင့်တာပါ။ ခွင့် ၂ ရက် ပေးတာကိုက လွန်လှပါပြီ။ ပြီးတော့ ဒါတွေကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့ Cannon ကင်မရာ၂ လုံးကို ဒှေါလာ ၂၀၀၀ ပေးပြီး ဝယ်ခဲ့တာတဲ့။ အဲ အဲဒီခရီးစဉ် အတွက် ကလည်း ဒှေါလာ ၃၀၀ လောက် အကုန် ခံလိုက် ရသေးသတဲ့။ နောက်ဆုံး သီပေါမင်း မြေးတှော ဒှေါတုတု နဲ့ တွေ့ခဲ့တယ် ဆိုပါတော့။ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းပြီး မှတ်တမ်းတွေ ယူခဲ့တယ် ဆိုပါတော့။ ပြန်ခါနီးမှ သူတို့မှာ နွမ်းပါးနေတာ တွေ့တာနဲ့ ရူပီး ၁၀၀၀ လှူခဲ့ ပါသတဲ့။ ကျွန်တှော ရယ်နေမိတော့တယ်။ အဖှောခှေါသွားတဲ့ ကုလားတွေကိုတောင် ဒှေါလာ အများကြီး ပေးခဲ့သေးတာ နောက်ဆုံး တှောဝင် မိသားစု ကို လှူတော့မှ ဒှေါလာ ၃၀ လောက်။ ဖြစ်ရလေ ခင်ဗျာ။ ဒီ ဝတ်ထု ဖတ်ပြီး စဉ်းစား မိတာက မြန်မာတွေဟာ ခေတ်နောက်ပြန် ဆွဲတတ်လွန်းတာနဲ့ လက်ရှိကို မမြင်နိုင်တာတွေ ပါပဲ။ မြန်မာတွေ သူတစ်ပါး လက်အောက် မရောက်ခဲ့တာ မြန်မာတွေ ညံ့လို့ပါ။ ဘုရင်တွေ ညံ့လို့ပါ။ သမိုင်းမှာ ခေါင်းဆောင် ညံ့ရင် ပြည်ပျက်တာ သဘာဝပါပဲ။ ကျွန်တှောကတော့ သိပ်ထက်မြက်တဲ့ မင်းညီမင်းသားတွေကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှု တစ်ခုနဲ့တင် ဒီဘုရင်နဲ့ အပေါင်း အပါတွေကို အတန်းအစား တစ်ခုမှာ ထားလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘုရင်ကို ကိုယ်မချစ်တဲ့ မျိုးချစ်စိတ် မရှိတဲ့ ကောင်လို့ ပြောရင်လည်း ခံရမှာပါပဲ။ ကျွန်တှောက Royal Family ကို လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရင်ထက် ပြည်ထောင်စုကို ပိုချစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။ ကိ်ုယ့်လူမျိုးကို ပိုချစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။ သက်ဦးဆံပိုင် ပဒေသရာဇ် စနစ်ဆိုတာ သူတို့ အတွက်တော့ ကောင်းပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ပြည်သူတွေ အတွက်တော့ ကျီးလန့်စာစား ပါပဲ။ သမိုင်းမှတ်တမ်း ဝင်မယ့် ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အတွက်တော့ ကိုအေးသိန်းကို ကျေးဇူး တင်လိုက်ပါတယ်။ သမိုင်းဆိုတာမျိုးက မှတ်တမ်း တင်ပေးမယ့် သူရှိမှ တိတိကျကျ သိကြရတာကိုး။ စဉ်းစားစရာ တစ်ခုက မြန်မာပြည်က ဆွေတှော မျိုးတှောတွေ ဘာလို့ သူတို့ကို မကူညီ သလဲ. မထောက်ပံ့ ကြသလဲ ဆိုတာကိုပါ။ ဖြစ်နိုင်တာ တစ်ခုက သီပေါမင်း သမီးတှောက ကုလားကို ယူခဲ့လို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်နေ့ကျရင်တော့ ကျွန်တှောလည်း အဲဒီဒေသကို သွားကြည့် ပါဦးမယ်။ သမိုင်း မှတ်တမ်းဝင် တစ်ခုခု တွေ့လို တွေ့ငြားပေါ့။
Idea , Diary
Posted by NLS at 2/24/2006 01:14:00 AM0comments Links to this post
Google rock again!! Now google will hostanice webpage for you as free as MsN's My Space or something like that. You dont need to know any html or any prgm code. Yahoooo! And also you dont need to announce your site on Internet, it will craw itself withinafew hours, and other search engines too. You just have one Gmail account to make it. I tried to register as soon as I heard that new, but unluckily they have limited the number, cuz still in Beta. But you still can submit your gmail to be announced when they are ready. Anyway I m very exciting to get Ajax - adding Google Pages. Dont be late!
Via : Unofficial Google Blog , Download Squad
Google Pages , Website
Posted by NLS at 2/24/2006 12:49:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/22/2006 06:35:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/22/2006 03:21:00 AM0comments Links to this post
ကုလားပြည်မှာ နေတာ ကြာလာတော့ ဒီက လူတွေ အကြောင်းကို ပိုပို သိလာပါတယ်။ တစ်ခါက ကျွန်တှော သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို ပြောဖူးတယ်။ အရင်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်းကို ကြံဖန် ချီးကျူး ပါဆိုရင် ကျွန်တှော တစ်ခုပဲ ကျေးဇူးတင်မယ်လို့။ အဲဒါက သူ့လက်ထက်မှာ ချစ်တီးတွေ အများအပြားကို ပြည်တှော ပြန်စေ ခဲ့တာပါပဲ။ အခု အဲဒီ အဆိုက ပိုပြီး ခိုင်မာသွားတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် သိပ်ညစ်ပတ် လို့ပါပဲ။ ဟုတ်တယ်။ ဒီမှာ ညဘက်ဆို လမ်းတွေမှာ ရေတွေ ရေတွေ အိုင်နေလိုက်တာ။ ရေထင်ပြီး သွားမနင်း လိုက်နဲ့။ အပေါ့ သွားထားကြတာပါ။ နေရာအနှံ့မှာ သေးပေါက် ကြတယ်။ လမ်းဘေး လူမြင်ကွင်း မှာလည်း ပေါက်ကြတာပဲ။ မြို့လည် လမ်းဘေးမှာလည်း ပေါက်ကြတာပဲ။ စကဿငာပူမှာ တုန်းကလည်း ကုလားတွေ အလုပ်လုပ်တဲ့ ဆိုက်တွေမှာဆို အနံ့တွေ ဟောင်နေတာပဲ။ သူတို့တွေ ညစ်တီး ညစ်ပတ် နိုင်ကြတယ်။
ပြီးတော့ India နဲ့ China ဟာ အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေ ဆိုပေမယ့် တိုးတက်လာတာ နှစ် ၅၀ လောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ India က Democracy ကို လက်ခံ ကျင့်သုံး နေပြီး China က ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ထားတဲ့ Communist ဝါဒကို ကျင့်သုံး နေဆဲပါ။ တကယ်တော့ တရုတ်က ကွန်မြူနစ် နိုင်ငံသာ ဆိုတာ သူတို့ တကယ် လက်ခံ ကျင့်သုံး နေတာက အဲဒီ လမ်းစဉ်နဲ့ လုံးလုံးကြီး မတူတော့ပါဘူး။ နာမည်ခံ သက်သက်သာ ရှိပါတော့တယ်။ India ကတော့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ ခံယူ ထားပေမယ့် ဒီမှာက အမျိုးဇာတ် ခွဲခြားတာတွေ၊ အဆင့်အတန်း ခွဲခြားတာတွေက အရမ်း အမြစ် တွယ်လွန်းနေတော့ တိုးတက် သင့်သလောက် မတိုးတက်တော့ ပါဘူး။ ဘာနဲ့ သွားတူသလဲ ဆိုတော့ တရုတ်က ဘီလူးခေါင်း ဆောင်းထားတဲ့ လူချော တစ်ယောက်နဲ့ တူပြီး၊ India ကတော့ မင်းသားခေါင်း ဆောင်းထားတဲ့ ရုပ်ဆိုးဆိုး လူတစ်ယောက်နဲ့ တူပါတယ်။ နိုင်ငံရေးကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူမှုရေးကို ဆိုလိုတာပါ။
တရုတ် မှာ စတိုးဆိုင် တစ်ခုထဲကို သွားတဲ့အခါ ဈေးရောင်းသူဟာ မိန်းခလေးတွေ ဖြစ်မယ်၊ လာရောက် ဝယ်ယူသူကို ချိုသာတဲ့ အပြုံးတွေ စကားတွေနဲ့ သူ့ကုန်စည်ကို ဝယ်ယူချင်လာအောင် စည်းရုံးမယ်။ Indian တွေကတော့ အဲလို မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ဆိုင်ထဲကို ဝင်လာတာနဲ့ ခြေဆုံး ခေါင်းဆုံး ကြည့်မယ်။ ပြီးရင် ခပ်ပိန်းပိန်း ယောကျှား တစ်ယောက်လာမယ်။ ဘာယူမလဲ မေးမယ်။ ဘာမှ မဝယ်ဘူး ဆိုတာ သိရင် လှည့်ထွက်သွားမယ်။ တကယ်လို့ ယူမယ်ဆိုလည်း မျက်နှာထား ရှစ်ခေါက်ချိုးနဲ့ ဝတ်ကျေတန်းကျေ ပေးမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thankyou ပြောမယ်လို့တော့ မထင်လိ်ုက်ပါနဲ့။ အဲဒါကြောင့် တရုတ်ဟာ ဈေးကွက် စီးပွားရေးမှာ India ထက် အများကြီး သာသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးလည်း တိုးတက်သွားတယ်။ Business သဘောကို ပိုပြီး သိတယ်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။
နောက်တစ်ခုက ဒီမှာ မြန်မာပြည်လိုပဲ နိုင်ငံခြားသား ဆိုရင် လှည့်ဖျားလိမ်လည် တတ်ကြပါတယ်။ ဈေးနှုန်းတွေ မတန်တဆ တင်တတ်ကြတယ်။ မြန်မာနဲ့ ကုလားဟာ စိတ်ဓါတ် အတှောလေး တူပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှု အတှော နည်းပါးပါသေးတယ်။ မရရင် မလုပ်ဘူး ရရင် လုပ်လိုက်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ရှိကြတယ်။ အဲဒီ စိတ်ဟာ လူမှု အဆင့်အတန်းကို မြင့်တက် မလာစေပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နည်းပညာမှာ India ဟာ အရမ်း တိုးတက်သွားပါပြီ။ နှစ် ၅၀ အတွင်းမှာ ဒုံးပျံတွေ လေယာဉ်ပျံတွေ ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီ။ သုခမြို့တှောလို ဇာတ်လမ်းထဲက နိုင်ငံကြီး တစ်ခုဟာ ဒီအချိန် လေးအတွင်းမှာ အဲဒီအချိန်က ကိုယ့်ထက် တိုးတက်တဲ့ မြန်မာပြည်လို နိုင်ငံမျိုးကို အပြတ်အသတ် ကျှောတက် သွားပါပြီ။ အဲဒါဟာ စဉ်းစားဖို့ ကောင်းတဲ့ အချက်တစ်ခုပါပဲ။ Indiaဟာ သူ့ကျွန်ဘဝ ရောက်ခဲ့ပေမယ့် ခုထိ အုပ်စိုးသွားတဲ့ အဂဿငလိပ်ကို မကောင်းမပြောပါဘူး။ တံခါးပိတ်ပြီးလည်း မဆက်ဆံ ခဲ့ဘူး။ စကဿငာပူက လီကွမ်ယု ပြောသလိုပါပဲ။ သူတို့ကြောင့် ကျွန်တှောတို့ တိုင်းပြည် အရမ်းတိုးတက် လာခဲ့တယ်တဲ့။ နိုင်ငံခြားသားကို ရန်သူလို့ မမြင်ပါဘူး။ ဒါဟာ ကျွန်တှောတို့ မြန်မာတွေနဲ့ ကွာတဲ့ အချက်ပါပဲ။
India ဟာ လူနေမှု အဆင့်အတန်းနဲ့ စိတ်ဓါတ် မြင့်တက်ခဲ့မယ် ဆိုလို့ရှိရင် နောက်နှစ်ငါးဆယ် အတွင်းမှာ အနောက်နိုင်ငံတွေကို မှီသွားတော့မှာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုထက်ထိတော့ ရှေးရိုး ဆန်နေကြတုန်း ပါပဲ။ လမ်းဘေးမှာ သေးပန်း နေကြတုန်း ပါပဲ။ နွားတွေကို မြို့လည်ကောင်မှာ လွှတ်ထားတုန်း ပါပဲ။ တှောပါသေးတယ် မြန်မာ ပြည်ကသာ သူတို့ကို ပြန်မလွှတ် ခဲ့ရင် အခုအချိန်လောက်ဆို မြန်မာပြည်ကြီး ဒီထက် ဆိုးနေလောက်ပြီ။ ဒီတစ်ခုတော့ ကြံဖန် ကျေးဇူး တင်လိုက်ပါတယ် ဦးနေဝင်းကို။ ကျွန်တှောတို့ ရန်ကုန်မြို့ ကြီးဟာ ကုလားပြည်ထက်တော့ သာယာ သန့်ရှင်း ပါသေးတယ်ခင်ဗျား။ စိတ်အဆင့် အတန်းလည်း မြင့်နေပါသေးတယ် ခင်ဗျား။ အသိဉာဏ်နဲ့ အတွေးအမြင်တွေ၊ ပညာတွေ မှာသာ အများကြီး ပြတ်ကျန် ရစ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တှောတို့ မကြိုးစားရင် နောက်မျိုးဆက်တွေ လက်ထက်မှာ ချွတ်ခြုံကျ တော့မှာ အသေအချာပါ ခင်ဗျား။
Tag : Nay Win , Myanmar , India , China , Idea , Diary
Posted by NLS at 2/21/2006 08:46:00 PM0comments Links to this post
ကျွန်တှော့ အတွက်တော့ ကွန်ပြူတာဟာ အဖှောမွန်ကောင်း တစ်ယောက်ပါပဲ။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ လေ့လာစရာတွေ သင်ယူစရာတွေ အသစ်အဆန်းတွေ နဲ့ ပြည့်နေတယ်။ နေ့စဉ် တွေ့ရှိတာ တွေထဲက ကောင်းနိုးရာရာ လေးတွေ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆောဖ့်ဝဲလ်လေးတွေ၊ စိတ်ဝင်စားစရာ နည်းပညာတွေ အသုံးချမှုတွေ ကို သူငယ်ချင်း တွေအတွက် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တှော ဝေမျှတဲ့ အရာတွေဟာ တတ်ကျွမ်းသူတွေ ပညာရှင်တွေ အတွက် မရည်ရွယ်ပါဘူး။ လွယ်လွယ်လေးနဲ့ သာမန်လူ တစ်ယောက် အလွယ်တကူ နားလည် နိုင်မယ့် ဟာတွေကိုသာ ရွေးချယ်ထားပါတယ်။
တချို့သူများက ကွန်ပြူတာကို သုံးသာသုံးနေတယ်။ ကိုယ့်စက် မမ်မိုရီ က လုံလောက်မှု ရှိရဲ့လား စွမ်းဆောင်မှု နည်းနေလား မသိကြပါဘူး။ ဒီဝဘ်ဆိုဒ်မှာ (Click) ကိုယ့်ပီစီကို Performance ကောင်းလာအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို ရှင်းပြထားပါတယ်။ ကျွန်တှောတို့လို စက်ကို မြန်အောင် သုံးလိုသူတွေ၊ မမ်မိုရီ အများကြီး လိုအပ်သူ Graphic Designer တွေအတွက် Windows' Preferences က လှဖို့ မလိုပါဘူး။ စက်ကို မြန်မြန် သုံးချင်တဲ့ သူတွေအတွက် ပြင်ဆင်ရမယ့် လွယ်ကူတဲ့ Trick လေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ( See More Here )
Sound Editingကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေအတွက် ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ် လေးက အရမ်း ကောင်းပါတယ်။ ပရှော ဖက်ရှင်နယ်လ် မဟုတ်သူ တွေအတွက် ပိုက်ဆံ အကုန်ခံပြီး Acid လို WaveLab လို LincenseSoftware တွေ ဝယ်သုံးစရာ မလိုပါဘူး။ အနည်းဆုံး PirateSoftware အတွက်တောင် ပိုက်ဆံ ၁၀၀၀ လောက် အကုန် ခံစရာ မလိုပါဘူး။ Audacity ဟာ အဲဒီ လိုင်စင် ဆောဖ့်ဝဲလ်တွေ နီးပါး ကောင်းမွန်ပါတယ်။ အက်ဆစ်လို Track တွေ ခွဲပြီး Mix လုပ်လို့ ရတယ်။ WaveLab လို အသံ Effect တွေ ထည့်လို့ ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ Record လုပ်တာရော Edit လုပ်တာရောက WaveFile ဖြစ်ရပါမယ်။ ကိုယ်ပြင်ဆင် ပြီးသားဖိုင်ကို ပြန်ပြီး Export လုပ်တဲ့အခါ Wave ဒါမှမဟုတ် Mp3 လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ( Download Here )
Software , Windows XP Performance , Download , Sound Editing , Audacity
Posted by NLS at 2/21/2006 02:26:00 AM0comments Links to this post
ဒီနေ့ ယိုးဒယား တွေရဲ့ “ ဆူရိယိုထိုင်း ” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို ပြန်ကြည့် ဖြစ်တယ်။ တဆက်တည်းမှာ မြန်မာတွေရဲ့ ကိန်းကြီးခန်းကြီး ပြောခဲ့တဲ့ လူမင်းရိုက်တဲ့ “ ကျန်စစ်သား” ဇာတ်ကားကြီးကို ပြန်သတိရသွားတယ်။ ကျွန်တှော မြန်မာပြည် ပြန်လာတော့ ကျန်စစ်သားက ရုံတင်ပြီးပြီ။ အဲဒီကားကြီးကို ညွှန်းလွန်းလို့ ရဲရင့်ရုံမှာ ထင်ပါရဲ့ မှောင်ခို လက်မှတ် ဝယ်ပြီး ကြည့်လိုက်တယ်။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ ရှက်လိုက်တာ။ တောက်တခေါက်ခေါက် ဖြစ်နေမိတယ်။ ကျွန်တှော့လို စာဖတ်သူတိုင်း၊ ဗီဒီယို အက်ဒင်းတင်းတွေ ၊ ဇာတ်ညွှန်းတွေ အနည်းငယ် နားလည်သူတိုင်း၊ ကင်မရာ သဘောကို နားလည်သူတိုင်း ဒီဇာတ်ကား ဘယ်လောက် ညံ့လည်း ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို နိုင်ငံတကာမှာ ပြတယ်တဲ့။ ကျွန်တှော ရှက်လိုက်တာ။ ကျန်စစ်သားလို သမိုင်းဝင် မင်းတစ်ပါးဟာ ဇာတ်လမ်း တစ်ခုလုံး နေရာအနှံ့သွားပြီး ဖွန်ကြောင်နေတယ်။ နီးစပ်ရာ မိန်းမကို ယူတယ်။ ပုဂံပြည့်ရှင်ရဲ့ နန်းတှော မြို့ရိုးကြီးဟာ ညံ့ဖျင်းလွန်းတယ်။ အစစ် တည်ဆောက်ဖို့ မလိုပါဘူး။ ကွန်ပြူတာ ပညာနဲ့ ဖန်တီးလို့ ရပါတယ်။ လူငယ်တွေထဲမှာ ဖန်တီးနိုင်သူတွေ အများကြီးပဲ။ တိုက်ပွဲတွေဟာ မပီပြင်ဘူး။ ဝတ်စား ဆင်ယင်မှုတွေက သဘာဝမကျဘူး။ ငရမန်ကို ကျန်စစ်သား စစ်ထိုးတဲ့ တိုက်ပွဲဟာ မြင်း၁၅ ကောင်လောက်နဲ့ လူ ၅၀ လောက်နဲ့ ပြီးသွားတယ်။ မြင်းတွေက ဘုရင့် မြင်းနဲ့ မတူဘူး။ မြင်းပိန် တွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဝင့်ကြွားမှု မရှိဘူး။ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်အိမ်လည်း တိကျမှု မရှိဘူး။ ဒီဇာတ်ကားကို ယိုးဒယားကသာ ကြည့်မိရင် ရယ်ကြမှာဘဲ။ သူတို့ ရိုက်တဲ့ “ ဆူရိယိုထိုင်း” ဟာ အများကြီး အပြတ်အသတ် သာတယ်။ ဇာတ်လမ်း ခိုင်မာတယ်။ ကျွန်တှောကတော့ ဒီလို မင်းတစ်ပါးကို ပစ်စလက်ခက် ရိုက်ပစ်ရက်တဲ့ လူမင်းကို အံ့အားသင့်လို့ မဆုံးဘူး။ အဲလို ကားမျိုးသာ အကယ်ဒမီ ရမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အဆင့်အတန်းကို ခန့်မှန်း နိုင်နေပြီ။ ရှက်ဖို့ ကောင်းလိုက်တာ။ ကျွန်တှောတို့ မြန်မာတွေ အပြောမကြီးဘဲ အလုပ်နဲ့ သက်သေပြဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
Posted by NLS at 2/21/2006 01:21:00 AM0comments Links to this post
ကျွန်တှော ဒီနေ့ မဟာရာမာရဏ ဇာတ်တှောကြီးကို ပြန်ဖတ် တော့မှ ငယ်ငယ် ကလေး ဘဝက အသိလွဲ ခဲ့တာတွေကို ရယ်မိတော့တယ်။ Hindu စာပေနဲ့ အနုပညာတွေဟာ လိင်မှု အကြောင်း အရာတွေ ရမက်တွေ တဏှာတွေနဲ့ သိပ်မကင်းကြပါဘူး။ အဲဒီလို ပြောလို့ ရှုံ့ချတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။ ကျွန်တှော ပြောချင်တာက သူတို့ဆီမှာ နှစ်ထောင်ပေါင်း များစွာထဲက ဒီဘာသာရပ်နဲ့ ရင်းနှီးပွင့်လင်း လာခဲ့တယ်လို့ ဆိုချင်တာပါ။ ကာမသျှတြ (KamaSutra) ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်ကို သူတို့ ဆီမှာ စာအနေနဲ့ ပြုစုတာ အေဒီ ၁ ရာစု လောက်ကတည်းကပါ။ ဘုရားကျောင်းတွေ စေတီတွေ မှာလည်း အဲဒါနဲ့ ပတ်သတ်တာတွေ အများအပြားကို ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွ အဖြစ် မြင်နိုင်ပါတယ်။ အဲ အဲဒါတွေကို မြန်မာ ဘာသာ ပြန်တဲ့အခါမှ အခက်တွေ့တော့ တာပါ။ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုတဲ့ အရာခပ်ကြီးကြီးနဲ့ တိုက်ရိုက်မပြန်သင့်ဘူး ဆိုပြီး အစွဲအလန်း ကြီးကြတော့ ဘာသာ ပြန်တာတွေက လွဲကုန်တယ်။ ကျွန်တှော ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက ရာမ ဇာတ်တှောကြီးနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့တယ်။ ကျွန်တှောတို့ အိမ်မှာ အရမ်းလက်ရာ ကောင်းတဲ့ ရာမပုံစာအုပ် ရှိတယ်။ ဘယ်သူဆွဲတယ် ဆိုတာကိုတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ပြောချင်တာက သမိုင်း ဒဏဿဍာရီ မှာပါတဲ့ နတ်ဒေဝတာ တွေနဲ့ ကိုယ်ဝန် ယူကြတဲ့ အကြောင်းပါ။ ဥပမာ- ကျွန်တှော ငယ်ငယ်က ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ “ သိကြားမင်းသည် ချက်တှောကို လက်ဖြင့် သုံးသပ်သောအခါ မိဖုရားကြီးတွင် အတုမရှိ အားအင်ရှိသော သားသည် ကိန်းဝပ်သည် ” ဆိုတာမျိုးကို အသက် ၂၅ လောက်အထိ ဪ ဒါဟာ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် မူရင်း စာအုပ်တွေထဲမှာကိုက ဒီလို ရေးထားလို့ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ခဲ့မိတာပါ။ အခုအချိန် မူရင်း စာအုပ်တွေကို ဖတ်ရတော့မှ ဒီလို မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိရပါတော့တယ်။ မူရင်း စာအုပ်တွေမှာ တိတိကျကျ ရေးပါတယ် ခင်ဗျား။ ဗိုက်ကို လက်နဲ့ သပ်လို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တယ် ဆိုတာ Hindu စာပေမှာ မတွေ့ပါဘူး ခင်ဗျား။ အင်း သူတို့တွေ ပေါင်းဖှောကြတယ်လို့ အတိအလင်း ရေးပါတယ်။ ကျွန်တှော ဆိုလိုချင်တာက မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာကတော့ လူတိုင်းသိကြ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာလို့ အဲဒါကြီးကို ပိုပြီး ယုတိ မရှိအောင် ရေးကြရတာလည်း။ အဲဒါဟာ လူကို အမှောင်တိုက် ပို့တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒါမှမဟုတ် ရှေးမြန်မာတွေက မသင့်တှောဘူး ထင်လို့ အဲလို ပြောင်းရေးတာလား။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် မှားယွင်းတာကိုတော့ မရေးသင့်ပါဘူး။ ကျွန်တှော့မှာ ရယ်လိုက်ရတာ။ ဆိုလိုချင်တာက မူရင်းစာပေတွေမှာ လူစွမ်းကောင်းတွေကို မွေးဖွား ဖန်တီးပေမယ့် နဲနဲ ယုတိ ရှိအောင် ဖန်တီးထားတယ်လို့ ဆိုချင်တာပါ ခင်ဗျား။ ယောင်ပြီးတော့ဖြင့် ချက်တှောကို လက်နဲ့သပ်ရင်ဖြင့် ဒါမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်လို့ အထင်မမှား ကြပါနဲ့။
Idea , Diary , Ramayana , Kama Sutra , Funny
Posted by NLS at 2/21/2006 12:47:00 AM2comments Links to this post
Those are ancient myanmar hair styles. I copied print out version of U Aye Myint's Burmese Design Through Drawings Book and transformed to Computerize Graphic. This book is amazing, but unfortunately can buy only in Thailand (somebody want to help?) Okie. For researchers and collectors: take quality pictures via emails. This is my own creation for free sharing. But let me know if you wanna use in any kind of publishings.
See above picture here : Expend
Download Good Quality pic here : Rar File ( you need to unzip file)
Mail me : lynnseck@yahoo.com
Tag: Myanmar Hair Style , Design
Posted by NLS at 2/20/2006 05:23:00 AM0comments Links to this post
Very attractive Body Painting
Warning : not for under 15
Posted by NLS at 2/20/2006 01:14:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/20/2006 12:51:00 AM0comments Links to this post
ငါဟာ လောကထဲကို ဘာအတွက်များ ရောက်လာခဲ့သလဲ။ ပတ်သတ်တဲ့ သူတိုင်းဟာ စိတ်ဆင်းရဲကြရတယ်။ ဘာဂြိုဟ်တွေ နကဿခက်တွေ လွှမ်းမိုးခံနေရသလဲ။ ငါမကောင်းဘူးလို့ အခါတစ်ရာ၊ တစ်ထောင် ၊ တစ်သောင်း အှောလိုက်ရင် သက်သာရာ ရမလား။ လူတွေ့ရင် ပြုံးပြပြီးတော့ နောက်ကျောမှာ အတင်းပြောတတ်တဲ့ မင်းတို့လို သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ငါမုန်းတယ်။ ဒှေါလာ တစ်ဆယ်လောက်နဲ့ အထင်သေး ကြည့်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်း ဆိုတဲ့ ကောင်တွေကိုလည်း ငါမုန်းတတ်ခဲ့ပြီ။ ငါ့အတွက် ကြေကွဲ ဝမ်းနည်း ရသူတွေကိုအတွက်လည်း ငါခံစားရတယ်။ ငါဟာ စိတ်ပျော့ညံ့တယ်လို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောတယ်။ ခေါင်းမာတယ် လို့လည်း ပြောတယ်။ ဟုတ်တယ်။ မင်းတို့ ငါကြုံတွေ့ရသလို ဘဝမျိုးတွေမှ မင်းတို့ မကြုံဘူးတာ။ မှတ်ထား။ ပညာတတ်တဲ့ ကောင်ဟာ ပညာကို လိုချင်တယ်။ အဲဒီပညာကို ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်ဘူး။ ပိုက်ဆံနဲ့လည်း မလဲ နိုင်ဘူး။ ပိုက်ဆံ ရဖို့ ပညာသင်ရမယ် ဆိုရင်တော့ ဆောရီးပဲ။ အငတ်နေလိုက်မယ်။
ငါက ခံစားလွယ်တယ်။ ငါ့ကို ခံစားလွယ်အောင် ဘဝက ပြုပြင်ယူခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ ငါက မာရေကျောရေ ရှိချင်ခဲ့တဲ့ ကောင်ပါ။ ငါဟာ သူတပါးကို သူများထက်ပိုပြီး ချစ်တတ်သူပါ။ ငါ့ကြောင့် သူများနာကျင်မှာစိုးလို့ ငါသာ နာကျင်ခံချင်တဲ့ ကောင်ပါ။ ဒါပေမယ့် မင်းတို့ ဂုဏ်ပြု ချီးကျူးစကားပြောဖို့ မလိုပါဘူး။ ငါ့မှာ နာကျည်းတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ ငါ့မှာ အမုန်းတရား မရှိဘူး။ ငါ့မှာ အမှတ်တရား မရှိဘူး။ အဲဒါကြောင့် အမှတ်သည်းခြေ မရှိတဲ့ ကောင်လို့ ဆိုချင်လည်း ရပါတယ်။ ငါမရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ မှားယွင်းခဲ့တာတွေ အများကြီးပဲ။ ငါဘယ်လို ပြင်ဆင်ရမလဲ။ ငါဘယ်လို ပေးဆပ်ရမလဲ။ ငါစိတ်တွေ ဆင်းရဲနေချိန်မှာ သူတို့တွေ ငါ့ကို နားမလည်ကြဘူး။ ငါ့ကို အားပေးစကား ပြောဖို့ မလိုပါဘူး။ ငါလိုချင်တာ တိတ်ဆိတ်ခြင်းပဲ။ ငါ့ကို နှစ်သိမ့်ဖို့ မလိုဘူး။ ငါလိုချင်တာ တိတ်ဆိတ်ခြင်းပဲ။ ငါ့ကို စကားတွေ လာလာ မပြောကြပါနဲ့လို့ တောင်းပန်တယ် မရဘူး။ မရတော့ ငါထွက်ပြေးတယ်။ ငါဟာ သူရဲကောင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ငါဟာ မဟာလူသား တစ်ယောက်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ငါ့မှာ ခံစားချက် ရှိတယ်။ ရမဿမက်ရှိတယ်။ နှလုံးသားရှိတယ်။ ငါဟာ ကြေကွဲတတ်တယ်။ ငါဟာ ငိုကြွေးတတ်တယ်။ ငါကောင်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ ငါဆိုးသွမ်းခဲ့ဖူးတယ်။ ငါ့ကိုယ်ငါလည်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ စိတ်အလို လိုက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ငါဟာ လူကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ခဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်မလာတော့ဘူး။ ငါဖြစ်ချင်ခဲ့တာတွေ အားလုံးဟာ အခြေအနေ အချိန်အခါတွေကြောင့် ပြောင်းလဲ သွားခဲ့ ရပြီ။ ဘယ်သူ့အပြစ်မှ မဟုတ်ဘူး။ အရာအားလုံးကို ငါ့ဘာသာ ငါဖန်တီး ယူခဲ့မိတာပါပဲ။ ဪ ငါအိပ်မှ ဖြစ်တော့မယ်။
Diary , Essay
Posted by NLS at 2/18/2006 08:32:00 AM0comments Links to this post
တကယ်ဆိုရင် ငါဟာသေချာ ပြောနိုင်တယ် ငါဟာ ငြီးငွေ့ အထီးကျန်
စာသင်ချိန်ငယ်ရွယ်စဉ်ခါ တုန်းမှာလို ပျှောရာ ကြီးပျင်းခဲ့ စိတ်တွေ
လူပုံလယ် မနေချင် ငါ့တစ်ယောက်ထဲပဲ
ရင်ခုန်သံအသေတွေကို ဖြန့်ကျဲရင်း အခန်းငယ်ထဲ
ချစ်တတ်တဲ့ စိတ်လေး မရှိသေးဘူး
မုန်းတတ်တဲ့ စိတ်လေး မလိုချင်သေးဘူး
အမြဲမှားယွင်းတတ်တဲ့ အရွယ်မှာ လူတိုင်းထက်ပိုပြီးမှားခဲ့
လောကမှာ ပိုင်ဆိုင်ချင်စရာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ မှားယွင်းမှုတွေပဲ မှားယွင်းမှုတွေပဲ
စာသင်ချိန် ငယ်ရွယ်စဉ်ခါ တုန်းမှာလို ပျှောရာ ကြီးပျင်းလိုက်ချင်
လောကမှာ ပိုင်ဆိုင်ချင်စရာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ မှားယွင်းမှုတွေပဲ မှားယွင်းမှုတွေ
အမြဲမှားယွင်းတတ်တဲ့ အရွယ်မှာ လူတိုင်းထက်ပိုအမှားတွေ ပိုများတယ်
လောကမှာ ပိုင်ဆိုင်ချင်စရာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ မှားယွင်းမှုတွေပဲ
ချစ်တတ်တဲ့ စိတ်လေး မရှိချင်ဘူး
မုန်းတတ်တဲ့ စိတ်လေး မရှိသေးဘူး
lay phyu , Song , Lyric
Posted by NLS at 2/18/2006 08:21:00 AM0comments Links to this post
နီးနီးနေစဉ် ရင်မှာ ကြင်နာမှုများ
တို့အရင်လို အတူတူ နေချင်လညး
ငိုချင်တာ မင်းလေး မေ့လိုက်ပါ
အချိန်ကို နောက်ဆုတ်ဖို့ မလွယ်ပါ
အချိန်ကို တားလို့ မဖြစ်နိုင်ပါ
မင်းနဲ့တို့ နောက်ပြန်ဆုံချိန် မျှောလင့်လို့
မင်းမရှိတဲ့ဘဝဟာ တကယ်ဆို မထူးတဲ့ ဘဝရယ်ပါ
တကယ်ကို ရူးမယ့် နေ့ရက်များ
Wine Wine , Song , Lyric
Posted by NLS at 2/18/2006 07:59:00 AM0comments Links to this post
သင်တို့ ပြန်သလိုတော့ ငါမပြန်လိုပါ
ငါကို ယုံကြည်ကိုးစားမှု နည်းသူဟု
ငိုချင်ရာ ငိုခွင့်ရသော အရွယ်မဟုတ်တော့
သို့နှင့် ငါလည်း ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ
အလင်းရောင်ကို တမ်းတမြဲ ဖြစ်ပါ၏
ငါ့နားများက လေဟာနယ်ထဲ ရောက်နေ၏
မျှောလွန်းသော မျက်လုံးများ ပြာဝေလာတတ်သည်
ရင်မဆိုင်ဝံ့ သောကြောင့်ဟု ထင်မြင်ခဲ့ပါသလား
နေသည် အရှေ့မှထွက်ပြီး အနောက်သို့ ဝင်ခဲ့သည်
ကျွန်တှောတို့က ထိုနေကိုကြည့်ပြီး အချိန်ကို သတ်မှတ်သည်
ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်မလုပ်ဘဲ သူများကို ဂရုတစိုက်လုပ်သူများတွင်
လူသည် အဆိုးဝါးဆုံး သတဿတဝါတစ်မျိုးပင် ဖြစ်ပါသည်။
poem , essay
Posted by NLS at 2/18/2006 05:37:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/18/2006 05:29:00 AM0comments Links to this post
Photo , Graphic Design
Posted by NLS at 2/18/2006 05:00:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/18/2006 04:51:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/18/2006 04:48:00 AM0comments Links to this post
ခရီးသွားရင်းနဲ့ မဟာဘရတ ဇာတ်တှောကြီး ဒုတိယတွဲကို အပြီးဖတ်လိုက်တယ်။ ဒုတိယ ပိုင်းကတော့ နှစ်ပြည်ထောင် မင်းသားတွေ စစ်ပြိုင်တဲ့ အကြောင်းကို အသေးစိတ် ရေးထားတယ်။ ဘီမ ဆိုတဲ့ မင်းသားက ကောရဝ မင်းသား ၁၀၁ ယောက်ကို ရင်ဆိုင်သတ်ဖြတ်ပုံ၊ အဇုန နဲ့ ခါန ဆိုတဲ့ ပဏဿဍဝ ညီအကို ရဲ့ မြှား ပြိုင်ပွဲတွေ အကြောင်းက ဒီဇာတ်ရဲ့ အသက်ပါပဲ။ ရှေးခေတ်က ရသေ့ပေးတဲ့ ဂါထာကို မန်းမှုတ်တဲ့အခါ သက်ဆိုင်ရာ နတ်ဒေဝါက ကြွလာပါသတဲ့။ ခါနဆိုတဲ့ လေးသမားဟာ လောကတစ်ခုလုံးမှာ အတှောဆုံးပါပဲတဲ့။ သူ့ကို ပဏဿဍဝတွေက အကိုအကြီးဆုံးဆိုတာ မသိဘဲ တိုက်ခိုက်ကြရတယ်။ ကုတီဆိုတဲ့ ဘုရင့် သမီးတှောက ဂါထာကိုရွတ်တဲ့အခါ နေနတ်သား ကြွလာပါသတဲ့။ ဘာလိုချင်သလဲ မေးတော့ မင်းသမီးက ရှက်နေပါသတဲ့။ အဲဒါနဲ့ နေနတ်သားက အဟမ်း.. ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာ သိပါတယ် ဆိုပြီး သားဆုပေးရာကနေ ခါနကို မွေးလာပါသတဲ့။ အဲဒီ ကုတီကနေ နောက်ထပ် မွေးတဲ့ သားငါးယောက်ကလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ သိကြားနဲ့ ရတဲ့ သူနဲ့၊ လေနတ်သားနဲ့ ရတဲ့သူနဲ့ ။ သူ့ယောက်ျား ဘုရင်ကြီးကို ရသေ့တစ်ပါးက ကျိန်စာ တိုက်လိုက်လို့ မိန်းမနဲ့ ပေါင်းဖက်ခြင်း ပြုလို့ မရပါဘူးတဲ့။ အဲဒါနဲ့ သူက သူ့မိန်းမကို နတ်ဒေဝါတွေနဲ့ ပေါင်းဖက်စေပြီး ကလေးမွေးခိုင်းတာပါ။ ဖတ်လို့တော့ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ စစ်ပွဲတွေ အကြောင်းကိုလည်း အသေးစိတ် ရေးထားတယ်။ သိကြားဆိုတာလည်း ပါတယ်။ လောကပါလ နတ်မင်းကြီး လေးပါးအကြောင်းလည်း ပါတယ်။ အသုရာတွေ အကြောင်းလည်းပါတယ်။ ဟနုမာန် အကြောင်းလည်းပါတယ်။ ရာမမင်း နန်းတင်ခဲ့တဲ့ ရာဝဏရဲ့ ညီတှော ဘီဘိသေန အကြောင်းလည်း ပါတယ်။ ဝေသဝဏ် နတ်မင်းကြီး အကြောင်းလည်း ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ပြီးချိန်မှာ ကျမ်းဂန်တွေကို အတှော သံသယ ဖြစ်လာမိတယ်။ ကရစ်သျှန ဘုရားရှင် စစ်ပွဲမှာ အဇုနကို ဟောတဲ့ တရားတွေဟာ ထင်ရှားလှတဲ့ ဘဂဝါဂီတ ဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ်။ အီပစ်တွေကို ဖတ်ချင်တဲ့ သူတိုင်းဟာ ဒီ မဟာဘရတ ဇာတ်တှောကြီးကို လုံးဝကို ဖတ်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်တှော့အတွက်တော့ တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် အဂဿငလိပ်စာကို အများဆုံး ဖတ်ခြင်းပါပဲ။
Mahabharata , Essay , Idea
Posted by NLS at 2/18/2006 03:55:00 AM0comments Links to this post
ကျွန်တှော မြန်မာတွေ ခေတ်နောက်ကျတဲ့ အကြောင်းကို စဉ်းစားနေမိတယ်။ အခု ကျွန်တှောတို့ အင်တာနက် သုံးနေတယ်။ ကျွန်တှော့လိုပဲ အင်တာနက် သုံးနေတဲ့ မြန်မာတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် သုံးသာ သုံးနေကြတယ်၊ ရှေးရိုးအတိုင်းပဲ။ ဥပမာ- ကျွန်တှောက Internet Browser ကို Fire Fox ရော IE ရော သုံးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Fire Fox က ကျွန်တှော့အတွက် အရမ်းအဆင်ပြေတယ်။ Function တွေ အများကြီး ပါတယ်။ အခုလို မြန်မာဘလှောခ့် လုပ်တဲ့ အခါလည်း အရမ်း အဆင်ပြေတယ်။ အိုင်အီးက အဲဒီလောက် အဆင်မပြေလှဘူး။ ဖိုင်းယားဖောက်စ် သုံးပြီး မြန်မာစာ တင်တဲ့အခါ CSS မှာ အနည်းငယ် ပြင်ဖို့ပဲ လိုတယ်။ မြန်မာကီးဘုတ်နဲ့ တိုက်ရိုက် ရိုက်ရုံပဲ။ Firefox မှာ Extension လို့ ခှေါတဲ့ Special Plug-In Program လေးတွေပါတယ်။ အဲဒါတွေက အလွန် အသုံးဝင်တယ်။ သူများဆိုဒ်တွေကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ကြည့်လို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှောတို့ မြန်မာတွေ တှောတှောများများ IE ကိုပဲ အရိုးစွဲနေကြတုန်းပဲ။ အိုင်အီးက ပိုအဆင် ပြေတဲ့ နေရာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တချို့ပရိုဂရမ်တွေ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေက အိုင်အီးနဲ့မှ ဖွင့်လို့ရတယ်။ Firefox မှ မဟုတ်ပါဘူး။ Opera လည်းကောင်းတာပဲ။ အရေးကြီးတာက အားသာချက် အားနည်းချက် တွေကို သိဖို့ပါပဲ။ အခုဆို IE7 Beta Version ပှေါလာတော့ ကျွန်တှောလည်း စမ်းသုံးနေတယ်။ အရင်ကထက် အများကြီး ပြောင်းသွားတာ တွေ့ရတယ်။ Tab Function လေးတွေ ပါလာတယ်။ နည်းပညာတွေဟာ တစ်ခုပြီးတစ်ခု အသစ်တွေ ဖြစ်လာတယ်။ ပိုပိုပြီးလည်း ကောင်းလာတယ်။ ကျွန်တှောတို့ အသုံးပြုတတ်ဖို့ပဲ လိုတာပါ။
Recommanded Browser : Fire Fox V.1.5.0.1
Internet Explorer7Beta , Developer Toolbar
Internet Browsers , Download , Software
Posted by NLS at 2/18/2006 03:29:00 AM0comments Links to this post
ဆခ် လူမျိုးတွေ အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ Amritsar မြို့က ရွှေကျောင်းတှော ဆိုတဲ့ ဟာကို ရောက်ခဲ့တယ်။ စေတီလို့ပဲ ဆိုပါတော့။ ရွှေတွေနဲ့ တည်ထားတယ်။ သူတို့က ဒီလောက် ရွှေလေးကို အမွှန်းတင် ပြောနေတော့ ကိုယ်ကလည်း ရွှေတိဂုံ စေတီတှောကြီး အကြောင်း ကြွားခဲ့တယ်။ မယုံကြဘူး။ လူတွေကတော့ အမြဲတမ်း ပြည့်ကျပ်နေတာပဲ။ အဲဒီအထဲကို စေတီပရဝုဏ် ထဲကို ဝင်တဲ့ အခါ ခေါင်းကို စည်းရတယ်။ ရေကန်ကြီး တစ်ခုရဲ့ အလယ်မှာ တည်ထားတယ်။ အဲဒီရေကန်ဟာ အလွန်ထူးခြား မွန်မြတ်တယ်လို့ သူတို့တွေက ဆိုတယ်။ ရေအနက်က ၃၅ ပေလောက် ရှိတယ်။ တချို့လူတွေက အဲဒီမွန်မြတ်တဲ့ ရေကို ချိုးကြတယ်။ စိမ်ကြတယ်။ တချို့က သောက်ကြသတဲ့။ ရေထဲမှာ ငါးတွေလည်း ပြည့်လို့။ ဂဂဿငါ မြစ်ရေလိုပေါ့။ ကျွန်တှောကတော့ ရုပ်ဝါဒကို ပိုနှစ်သက်တယ်ပဲ ဆိုဆို ဘယ်လိုမှ စဉ်းစားလို့ မရဘူး။ ဒီလောက် ညစ်ပတ်တဲ့ ရေဟာ ဘယ်လိုလုပ် သန့်စင်နိုင်မလဲ။ သောက်ဖို့ မပြောနဲ့ မျက်နှာတောင် မသစ်လိုဘူး။ အနောက်တိုင်းသားတွေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ကွာခြားတာလည်း မပြောနဲ့။ သူတို့ဆို ရယ်မှာပဲ။ ကျွန်တှောတို့ အရှေ့တိုင်းသားတွေဟာ လက်တွေ့သိပ်မကျဘူး။ အစွဲအလန်း ကြီးတယ်။ Superstitious ဖြစ်တယ်။ ဒီကျောင်းတှောကြီးဟာ India ရဲ့ ဘာသာရေး ပြသနာတွေ များစွာနဲ့လည်း ဆက်စပ် နေတယ်။ ဒီရေကန်ကြီးရဲ့ အောက်ဖက်မှာ ထူးခြားတာတွေ ရှိတယ် ဆိုပြီး Islam ကရော Hindu တွေကရော စူးစမ်းချင်ကြတယ်။ ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြတယ်။ ပြသနာတွေ သတ်ပွဲ ဖြတ်ပွဲတွေလည်း ဖြစ်ကြတယ်။ အနုပညာ လက်ရာတွေလည်း ရှိတယ်။ India ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ နေရာတစ်ခုလို့ ဆိုကြပါတယ်။ နယ်မြေကတော့ သိပ်မငြိမ်းချမ်းပါဘူး။ ဒီပိုစ့်က ဘာသာရေးကို ရှုံ့ချတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တှောတို့ ဘာသာမှာလည်း တလွဲဆံပင်ကောင်းပြီး အယူသီးနေကြတာတွေ အများကြီးပါ။ ကျွန်တှောက Logic ကိုစဉ်းစားတာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Golden Temple , Amritsar , India , Essay
Posted by NLS at 2/18/2006 03:04:00 AM0comments Links to this post
ခရီးတစ်ခု ထွက်စရာ ရှိလို့ ရက်အနည်းငယ် နားပါမယ်။ လာရောက် လည်ပတ် နှုတ်ဆက် သူတွေအားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပျင်းရိဖွယ် ဝါကျ ရှည်များကို ဖတ်ရှု ဝေဖန် အကြံပေးသူများ အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ရက်အနည်းငယ်မှ ပြန်လည် တွေ့ကြတာပေါ့။
Posted by NLS at 2/10/2006 04:40:00 AM0comments Links to this post
ကြယ်တွေကို ကြည့်ရတာ ပျှောဖို့ကောင်းတယ်။ တခါတုန်းက ကျွန်တှောဟာ ညပေါင်းများစွာ ကြယ်တွေကို တစိုက်မက်မက် ကြည့်ဖူးတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကြယ်ပုံပြင်တွေကို လိုက်ရှာဖတ်ပြီး ရုပ်ပုံတွေကို ဖှောကြည့်တယ်။ စိတ်ကူးယဉ် ဆန်တယ်လို့ ပြောရင်လည်း ခံရမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ညနက်နက်မှာ ကြယ်တွေကြည့်ဖူးသူတိုင်း ထူးခြားတဲ့ ခံစားမှုတစ်ခုကို ရကြမှာပါ။ သူတို့မှာ ဆန်းပြားတဲ့ နောက်ခံ ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ရှိနေတယ်။ ကျွန်တှော အခုနေတဲ့ နေရာမှာတော့ သစ်ပင်တွေ တိုက်တာတွေ နဲ့မို့ ဟိုးအရင်ကလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကြယ်တွေကို မငေးမော နိုင်တော့ဘူး။ စကဿငာပူ မှာတုန်းကလည်း မြို့ကမီးရောင်တွေကြောင့် ကောင်းကင်ကို သေချာ မမြင်တွေ့နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဗန့်ဂိုး ပြောတဲ့ လူတွေဟာ သေသွားပြီးတဲ့ အခါ ကြယ်တွေ ဖြစ်သွားနိုင်သတဲ့လား။ မင်းသားလေးတစ်ယောက် နေတဲ့ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် ကြယ်ကလေး တစ်လုံးဟာ ကျွန်တှောတို့ မျက်စိအောက်မှာ ပျောက်နေခဲ့တယ်။ ကလေးဘဝကလို လွတ်လပ်စွာ ကြယ်ငေးခွင့် မရတော့တဲ့ ကျွန်တှောဟာ ကွန်ပြူတာမှာ Virtual Astronomy Software လေး တစ်ခု တင်ထားပြီးပဲ ကြည့်နေခွင့် ရတော့တယ်။ ဒီ ဆော့ဖ်ဝဲလ် လေးက သိပ်ကို ကောင်းပါတယ်။ မြို့ရဲ့ ရောင်စုံ လှောင်ချိုင့်ထဲမှာ ပိတ်မိနေကြတဲ့ ကြယ်ငေးချင်တဲ့ သူတွေအားလုံး ဒါလေးကနေ ငေးခွင့် ရပြီပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း ဟင်းလင်းပြင်အောက်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ငေးမောခွင့်ကိုတော့ ကျွန်တှော အခုချိန်အထိ တပ်မက် နေဆဲပါ။ တချိန်ချိန်ပေါ့ ပြန်ရခွင့် ကြုံမယ်လို့ မျှောလင့်မိပါတယ်။
Astronomy , Stars , Software
Posted by NLS at 2/10/2006 04:06:00 AM0comments Links to this post
Je me déteste. Pourquoi je ne suis pas heureux? Je veux oublier mon passé.
Posted by NLS at 2/10/2006 12:40:00 AM0comments Links to this post
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တှော သွားနေလိုက်တာ နေ့များစွာ ကုန်ဆုံးသွားတယ်။ တခါတရံတော့ ဘယ်မှမသွားဘဲနဲ့ တောင်ကုန်း တစ်ကုန်းရဲ့ ထိပ်ကိုတက်ပြီး နေစထွက်တာကနေ နေဝင်ချိန်အထိကို ကျွန်တှောကြည့်နေမိတယ်။ တခါတလေတော့လည်း တစ်ညလုံးထိုင်ရင်း ကောင်းကင်က ကြယ်တွေကို ခြေပစ်လက်ပစ် ကြည့်နေမိတယ်။ တခါတလေတော့ ရိုးပြတ် တောတွေထဲမှာ အကြောင်းမဲ့ လမ်းလျှောက်နေမိတယ်။ တခါတလေတော့ ကလေးတွေ ငါးမျှားနေတာ ထိုင်ကြည့်ရင်း ကျွန်တှော့ကို မျှားခဲ့တဲ့ လောကကြီး အကြောင်းကို တွေးနေမိတယ်။ တခါတလေတော့ ကျွန်တှော တစ်ယောက်တည်း သီချင်းလေးတွေ ဆိုညည်းဖြစ်တယ်။ တခါတလေ မိုးထဲလေထဲမှာ လမ်းလျှောက် ပစ်လိုက်တယ်။ တခါတလေတော့လည်း ဘုရားပုထိုး တွေပှေါတက်ရင်း ဆွဲလွဲသံ လေးတွေကို နားစိုက်ထောင်မိတယ်။
ကျွန်တှောဟာ နယ်မြေဒေသများစွာကို ရောက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှောရောက်ခဲ့တဲ့ နေရာတွေဟာ ဘာတွေလည်း ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တှော မမှတ်မိတော့ဘူး။ မြို့တစ်မြို့ နယ်တစ်နယ်ကို ရွာတစ်ရွာကို ရောက်တဲ့အခါ အဲဒီဒေသရဲ့ နာမည်ကို ကျွန်တှောဟာ ဘယ်တော့မှ မမေးမိခဲ့ပါဘူး။ ဒီခရီးကို ထွက်လာခြင်းရဲ့ တစ်ခုသော ရည်ရွယ်ချက်က ကျွန်တှော့ မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ များများစားစား သိမ်းထားမိခဲ့တဲ့ အမှတ်အသားတွေ အားလုံးကို တစတစ ပြန်ထုတ်ပစ်လိုခြင်းကလည်း အဓိက အကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တှောဟာ နောက်ထပ်အပို ဝင်လာမယ့် အရာတွေအားလုံးကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကြဉ်ခဲ့တယ်။ လူပေါင်းများစွာကို ကျွန်တှောတွေ့ခဲ့တယ်။ လမ်းပေါင်း များစွာကို ကျွန်တှော သွားခဲ့တယ်။ အစာငတ်နေတဲ့ သူတွေတွေ့တဲ့အခါ ကျွန်တှော့မှာ ပါလာတဲ့ မုန့်တချို့ကိုဝေမျှခဲ့တယ်။ ကျွန်တှော့မှာ ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှ မရှိတော့တဲ့အခါ ကျွန်တှောဟာ ရောက်ရာအရပ်မှာ ရရာအလုပ်ကို ဝင်လုပ်ရင်း တစ်နေ့စာ အတွက် ပိုက်ဆံကိုရှာခဲ့တယ်။ နေ့ခင်းအချိန်တွေမှာ ကျွန်တှောဟာ လူကြီးသူမတွေနဲ့ စကားပြောပြီး လသာညတွေဆိုရင် ကလေးငယ်တွေကို ပုံပြောပြဖြစ်တယ်။ ကျွန်တှောနဲ့ အသွင်မတူသူများ တွေ့တဲ့အခါ ကျွန်တှောပြုံးရယ်နေခဲ့ပြီး ကျွန်တှောနဲ့ အသွင်တူသူ များကို တွေ့တဲ့အခါ ကျွန်တှော သွားရောက် နှုတ်ဆက် လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တှော့အတွက် ခရီးမြန်ဆန်ခြင်းက အဓိက မကျဘဲ ခရီးသွားခြင်းကသာ အဓိက ကျတာကြောင့် ကျွန်တှောဟာ လမ်းခရီး တစ်လျှောက်လုံး ဘယ်ယာဉ် ရထားကိုမှ မစီးနင်းခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တှော့ ခြေထောက်တွေဟာ ကျွန်တှော့ ယာဉ်ရထား ဖြစ်ပြီးတော့ ကျွန်တှော့ နှလုံးသားက ကျွန်တှော့ မောင်းနှင်အား ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ခရီးတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု သွားရင်း တစ်ညနေ မှာတော့ ကျွန်တှောဟာ ရွာလေးတစ်ရွာ မရောက်ခင် တောစပ်လေး တစ်ခုမှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျှောသွားခဲ့တယ်။
အပိုင်း ၁ ကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ပါ
Posted by NLS at 2/09/2006 07:43:00 PM0comments Links to this post
အဂဿငလိပ် Alphabets တွေကို လှလှပပ အရုပ်လေးတွေ ဖန်တီးပေးထားတဲ့ ဆိုဒ်လေး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်တီးသူ ရဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ ပညာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ကလေးတွေကို စာသင်တဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့ တူပါတယ်။ ကျွန်တှောကတော့ အဲဒီ ပုံလေးတွေကို Screen Shot ယူထားလိုက်ပါတယ်။
Source : Bemboszoo
Website , Idea
Posted by NLS at 2/09/2006 07:13:00 PM0comments Links to this post
အင်တာနက်မှာ လျှောက်သွားရင်း အခမဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေထဲက ဆန်းပြားတာလေးတွေကို ရှာကြည့်မိတဲ့ အခါ။ ဟောဒီ Tunatic ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေး တစ်ခု ကို တွေ့လာပါတယ်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲက ကိုယ့်ဆီမှာ ရှိတဲ့ သီချင်းတွေကို နာမည်နဲ့ သီဆိုသူကို ဖှောပြပေးနိုင်ပါတယ်။ စမ်းသပ်ကြည့်မိသလောက်တော့ အတှောလေး တိကျပါတယ်။ တခါတလေ သီချင်းတစ်ပုဒ် ရလာပြီး သီဆိုသူ မသိ၊ သီချင်းနာမည် မသိတဲ့အခါမျိုးမှာ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးက အသုံး ဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုဖို့ Earphone နဲ့ mic တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ရှာ ချင်တဲ့ သီချင်းကို နှစ်သက်ရာ ပလေယာ နဲ့ ဖွင့် ပြီးတဲ့ အခါ ၊ အဲဒီ ပရိုဂရမ်လေးကို Run၊ ပြီးရင်Mic ကို Earphone နားကပ်ပြီး အသံ ဖမ်းပေးဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ အဲ အဂဿငလိပ် သီချင်းများကိုသာ ရှာဖွေလို့ ရမှာ ဖြစ်ပြီး မြန်မာ သီချင်းများကတော့ ဒေတာဘေ့စ် ထဲ မဝင်သေးလို့ ရှာလို့ ရမှာ မဟုတ်ကြောင်းပါ ခင်ဗျား။
Source : Tunatic
Software , Song , Web
Posted by NLS at 2/09/2006 06:32:00 PM0comments Links to this post
စိတ်ညစ်တယ် စိတ်ညစ်တယ် စိတ်ညစ်တယ်။ သီချင်းတွေဟာ ငါ့အတွက် အဖှောမွန်ပဲ။ အရုပ်တွေဟာ ငါ့အတွက် အဖှောမွန်ပဲ။ ငါ့ကို စကားမပြောဘူး။ ငါကလည်း စကားပြောစရာ မလိုဘူး။ ငါစိတ်ညစ်တယ် ငါစိတ်ညစ်တယ်။ ဆေးလိပ်ကို မွ နေအောင် သောက်ပစ်လိုက်တယ်။ နှလုံးသားထဲ အထိကို အောင့်လို့။ ငါပန်းချီ ဆွဲတယ်။ ငါကဗျာ မရေးနိုင်တာ ကြာခဲ့ပေါ့။ ငါစာတွေ ရေးတယ်။ စာတွေဟာ ငါ့နှလုံးသား ထွက်ပေါက်ပဲ။ ငါ့ကို စကားမပြောဘူး။ ငါကလည်း စကားပြောစရာ မလိုဘူး။ လူတွေ သွားနေကြတယ်။ ငါလည်း လူဆိုတော့ သွားနေရတယ်။ ငါပြုံးနေတိုင်း ပျှောရွှင်နေတဲ့ ဘဝတစ်ခုလို့ မင်းတို့တွေ မထင်ကြပါနဲ့။ ငါ မျက်ရည်ကျတိုင်း ဝမ်းနည်းလို့လို့ မထင်ကြပါနဲ့။ ငါ့ကမဿဘာဟာ ငါ့ကွန်ပြူတာလေးပဲ။ ငါ့ကွန်ပြူတာ ဆိုတာ ငါ့ကွန်ပြူတာ မဟုတ်ဘူး။ မိဘ ဝယ်ပေးထားတဲ့ ကွန်ပြူတာ။ ငါဟာ ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးတောင် မဝယ်နိုင်ဘူး ။ ဘာဖြစ်နေတာလည်း။ ပိုက်ဆံမရှိလို့လား။ ပိုက်ဆံရှိပါတယ်။ ငါစိတ်မချမ်းသာဘူး။ အမေက အပြင်ထွက်တဲ့။ ဝယ်ချင်ရာ ဝယ်တဲ့။ ရပါတယ်။ ဝယ်ပစ်လိုက်တယ်။ ပိုက်ဆံဆိုတာ သုံးရတာ လွယ်လွယ်လေးပါ။ ဘယ်လောက် ကုန်အောင် သုံးချင်လဲ။ အေးအေးဆေးဆေးပဲ။ တစ်ရက်ထဲနဲ့ သိန်းများစွာ ကုန်သွားနိုင်တယ်။ သူတို့တွေက ငါ့ကို အရင်ကလို ပျှောရွှင် တက်ကြွတဲ့ လူငယ်တစ်ဦး အဖြစ် မြင်ချင်ကြတယ်။ ပျှောရွှင် တက်ကြွတယ်ဆိုတာ တချိန်ကပေါ့ အမေ။
ငါ့ကို ပစ်ထားလိုက်ကြစမ်းပါ။ စဉ်းစားကြည့်တယ်။ ငါ့ကိုယ်ငါ ပြင်စရာတွေ အများကြီးပဲ။ သူတစ်ပါးကို အလေးထားလွန်းတာကို သတ်ပစ်ရမယ်။ ငါဟာ စာတွေ ဖတ်ရင်း ဖြစ်တည်မှုပဓါန ဝါဒ ဆိုတာကို အရမ်းနှစ်သက်လာတယ်။ ယန်းပေါဆတ်ကို သဘောကျလာတယ်။ ဆိုင်မွန် ဒီဗူးဗွားကို တွေ့ချင်လာတယ်။ ငါ ဗန့်ဂိုးလိုတော့ သေခါနီး မအှောပါဘူး။ ငါဟာ ခေါင်းမာတယ်။ ငါ့အတွက် တက်ကျမ်းဆိုတာ မင်းသုဝဏ်ရဲ့ မောင်ခွေးဖို့ ကဗျာများလောက်တောင် တန်ဖိုးမရှိဘူး။ သူများတွေ ယုံတဲ့ ကျမ်းစာတိုင်းကို ငါမယုံတတ်ဘူး။ ငါ့မှာ အရည်အချင်းတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ငါလုပ်ချင်တဲ့ ငါလုပ်သမျှ အရာတိုင်း အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ဖြစ်ချင်ရင် ဖြစ်တယ်။ ဘာမှ မဖြစ်ချင်တော့တာတော့ ငါလည်း ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ ငါ့စိတ်ကို ဘယ်သူတွေ သတ်ခဲ့ကြသလဲ။ ငါ ရန်သူလို့ မမြင်ပါဘူး။ တစ်ယောက်တည်း နေရတာ ကောင်းတယ်။ ဘယ်သူမှ မရှိခြင်းဟာ ငါ့ကို စကားမပြောဘူး။ ငါ့ကို စကားပြောတယ်။ ငါကလည်း စကားမပြောဘူး။ ငါတစ်ယောက်တည်း စကားပြောတယ်။
ငါသီချင်းတွေ ရေးဖြစ်ဆိုဖြစ်တယ်။ ခံစားချက် မဲ့တယ် လို့ ယူဆရင် ဖြဲဆုတ်ပစ်လိုက်ရင်းနဲ့ အနဲအကျဉ်းပဲ ကျန်တယ်။ ငါ့ဘဝဟာ အေးချမ်းပါတယ်။ ငါ့ဘဝဟာ မအေးချမ်းဘူး။ ငါ့မှာ နာမည် မရှိဘူး။ ငါဟာ ကှောဖီကို ကြိုက်တယ်။ ကှောဖီကြိုက်သူတိုင်း ငါနဲ့ စကားပြောလို့ ရတယ်။ ငါ့ကို ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ ဖျှောစပ်ဖို့ လာမပြောကြပါနဲ့။ သောက်ချင်သောက် မသောက်ချင်နေ ပြန်သွားလို့ ရတယ်။ ငါရိုသေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါမှာ ဘာ ဂါရဝ တရားမှ မရှိဘူး။ ဒီလိုလူမျိုးကို လာလာပြီး စကားမပြောလည်း ရပါတယ်။ အဖှောမရှိလည်း ပျှောတတ်ပါတယ်။ ငါဟာ ဒီလိုနေရင်း နေရင်းနဲ့ မှတ်ဉာဏ်တွေ ယိုယွင်းလာတယ်။ စကားပြောရမှာတွေ ဝန်လေးလာတယ်။ ငါပျှောပါတယ်။ လာလာ မနှောက်ယှက်ကြစမ်းပါနဲ့။ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်သီချင်း ကိုယ်ဆိုပြီး ပျှောပျှော နေကြစမ်းပါ။ မင်းတို့ပျှောရင် ငါလည်း ပျှောပါတယ်။ လောလောဆယ်.သိကြားမင်းဆိုတာကို ဘယ်လိုမှ ယုံလို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ မယုံဘူး ပြောရင်လည်း လူတွေက ဘာသာတရား မလေးစားတဲ့ကောင်လို့ အပြောခံရဦးမယ်။ တောက်.သွားစမ်းပါ။ ဘယ်သူ့ ထမင်းမှ စားနေတာ မဟုတ်ဘူး။ လူဖြစ်လာလို့ ထမင်းစားနေတာ။ အေးဆေးပဲ။ ထမင်းမရှိရင် တခြားဟာ စားမယ်။ ဘာမှ မရှိရင် ဘာမှ မစားဘူး။
Posted by NLS at 2/05/2006 10:40:00 PM0comments Links to this post
ဘာမှမသိဘဲ ခရီးသွားတဲ့ ခြေထောက်တွေ
ငါ့အတွက် တခုခုတော့ ထားခဲ့ပါ
ကျွန်တှော နှုတ်ခမ်းလေး တစ်စုံထားခဲ့တယ်။
သက်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ တွေအားလုံးတော့ ပြန်ယူသွားခဲ့တယ်။
သူမက ကျွန်တှော့ကို အိတ်ဆောင် နာရီလေး တစ်လုံးပေးတယ်။ ကက်ဆက် သေးသေးလေး တစ်လုံးပေးတယ်။ နာရီ ဓါတ်ခဲကို သူမ ဖြုတ်ယူထားလိုက်တယ်။ ကျွန်တှော တခါတည်း ရင်ဘတ်ထဲမှာ ထည့်သိမ်းထား ခဲ့လိုက်တာ ဒီနေ့ထက်ထိတိုင်ပဲ၊ တခါမှ မထုတ်ဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှောမှတ်မိနေတယ်။ နာရီလေးဟာ ၁၁ နာရီ ၂၀ မိနစ်မှာ ရပ်တန့် နေပါလိမ့်မယ်။ ကက်ဆက်လေးမှာကတော့ အခွေပါမလာခဲ့ဘူး။
တခါတရံ မောပန်းတဲ့အခါ ပိုင်ရှင်မရှိတဲ့ တဲငယ်လေးတွေမှာ ခဏတာနားခိုတယ်။
ဆာလောင်မွတ်သိပ်တဲ့အခါ သဘာဝအတိုင်း စီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်ချောင်းတွေကို လိုက်ရှာပြီး အေးမြတဲ့ရေကို သောက်သုံးတယ်။ လူတွေက ကျွန်တှော ဘယ်ကလာလဲ ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ လို့မေးကြတိုင်း လင်ယုတန် ပြောတဲ့ ခရီးသည်ဟာ ကျွန်တှောပါပဲလို့ ကျွန်တှော ပြန်ပြောတဲ့အခါ သူတို့တတွေ မျက်မှောင်ကြုံ့ပြီး ပြန်ကြည့်ကြတယ်။ ကျွန်တှောကတော့ ရယ်မိတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တှောဟာ ခရီးဘယ်ကနေစပြီး ဘယ်ကို သွားရမှန်း မသိတဲ့ ခရီးသည်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ် မိတ်ဆွေတို့။
Posted by NLS at 2/05/2006 07:04:00 PM0comments Links to this post
အချစ်မရှိတဲ့ဘဝ လက် မရှိတဲ့ဂဏာန်း .. :P
Posted by NLS at 2/05/2006 05:19:00 PM0comments Links to this post
ကိုယ့်ကိုကိုယ် သဲလွန်စ ပြန်ရှာမယ်
ကျောင်းတှောသူ ကဝေမလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေက
ကျွန်တှော့ရဲ့ မပွင့်ဖူးသေးတဲ့ ပန်းလေးတွေဖြစ်တယ်
မတူးဖှောခဲ့မိတဲ့ အနမ်းလေးတွေများ ပြန်ရမယ်ဆိုရင်
သူမရဲ့ အိပ်ယာခင်းလေးမှာ သနပ်ခါးနံ့လေးတွေ သင်းနေမယ်
သူမရဲ့ ဆံနွယ်လေးတွေက လှိုင်းတွေလို ညို့ရီလို့ တွဲခိုဆိုင်းနေမယ်
သူမရဲ့ ဘယ်လက်သန်းလေးမှာ အဖြူရောင်လက်စွပ်လေးရှိနေမယ်
ငါ့နှလုံးသားက သံပြိုင်တေးကို တိုးတိုးဆိုနေရ
အကာလ ညတွေ ဖြစ်နေလည်း မြင်နိုင်တယ်
ပျောက်သွားတဲ့ အသံတိုင်းမှာ ရှောဝါရွက်တွေ ကြွေကျတယ်
ငါ့လက်များက ဂီတကို ရိုက်ခတ်မယ်
Posted by NLS at 2/05/2006 05:15:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/05/2006 05:12:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/02/2006 05:28:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/02/2006 05:22:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/02/2006 03:57:00 PM0comments Links to this post
ပုံကို http://www.seasite.niu.edu မှ ကူးယူဖှောပြပါသည်။
Posted by NLS at 2/02/2006 03:52:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/02/2006 03:44:00 PM0comments Links to this post
အထီးကျန်ခြင်း ဆိုတာ တကယ်တော့ အရာများစွာကို စွန့်လွှတ် ဆုံးရှုံး လိုက်ရခြင်းပါပဲ။ ကိုယ့်ကို ရစ်တွယ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချစ်ခင်နှစ်သက်သူတွေ၊ ကိုယ်မြတ်နိုးတဲ့ အရာတွေကနေ အဝေးကို ရောက်သွားတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် ဒါတွေကို ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့အခါ အဲဒီ အထီးကျန်ခြင်း ဆိုတဲ့ အရာဟာ ရင်ထဲကို ပြင်းပြင်းပြပြ ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ အဲဒီစိတ် ဝင်ရောက်လာတဲ့ အခါ လူသားတစ်ယောက်ဟာ အများကြီး ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြောက်ရွံ့လာတယ်။ မိမိကိုယ်ကို မုန်းတီးလာတယ်။ အရာရာကို အဆိုးမြင်လာတယ်။ သံသယစိတ်နဲ့ ကြည့်တတ်လာတယ်။ အယုံအကြည် နည်းပါးလာတယ်။ မိမိစိတ်ထင်ရာကို လုပ်တတ်လာတယ်။ အလေးအနက်ထားမှု ယိုယွင်းလာတယ်။ နာကျင်တယ်။ အချိန်တှောတှောများများမှာ ကိုယ့်ရဲ့ သိစိတ်ရော မသိစိတ်ကပါ အဲဒါရဲ့ စိုးမိုးမှုကို ခံလာရပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက အထီးကျန်ခြင်းကို ဖန်တီးသလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်တဲ့ အခါမှာ ပထမဆုံးက မတူညီတဲ့ အတွေးအမြင်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယက လူတွေရဲ့ ပစ်ပယ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယက လူတွေကို ပစ်ပယ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စတုတဿတက မိမိကိုယ်ကို ခွင့်မလွှတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပဥဿစမက သူတပါးကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆဋဿဌမက စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်အားငယ်မှုနဲ့ ဘဝင်မြင့်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ သတဿတမက အတဿတ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ ချစ်မြတ်နိုးသူတွေနဲ့ ကွေကွင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အထီးကျန်ခြင်းဟာ သိပ်ကို လွမ်းဆွတ်ကြေကွဲစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဘယ်သူနဲ့မှ စကားမပြောချင်၊ ဘယ်သူကမှလည်း ကိုယ့်ကို နားလည်မပေးနိုင်၊ ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်ခံစားချက်ကို မသိကြ ။ အဲလိုနဲ့ တမြေ့မြေ့ ခံစားရင်း ထိုသူဟာ လူတွေနဲ့ ပိုပြီးပိုပြီး ဝေးသွားပါတယ်။ အထီးကျန်သူများဟာ သူတို့ ခံစားချက်ကို လွယ်လွယ်နဲ့ ပြောမပြတတ်ပါဘူး။ သူတို့ တစ်ဦးချင်းစီမှာ နာကျင်ကြေကွဲစရာတွေ၊ ပြောပြလို့ မရတဲ့ အကြောင်းတွေ ၊ နောင်တတွေ၊ ခါးသီးမှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တှောတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အထီးကျန် ဖြစ်နေသူတွေကို တွေ့တဲ့အခါ ဒီအတိုင်း ပစ်မထားလိုက်ဘဲ နွေးနွေးထွေးထွေး ကူညီ ဖေးမ အကြံပေးကြမယ် ဆိုရင် ကျွန်တှောတို့ လောကကြီးမှာ နာကျင်ခံစား ခါးသီးတဲ့ အမုန်းတရားတွေ အများကြီး လျော့ပါးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် ဤနေရာသို့ နှိပ်ပါ
ဖိုင်ကို ဖွင့်ရန် ဤ စကားဝှက်ကို သုံးပါ ( loneliness )
Posted by NLS at 2/02/2006 03:25:00 PM0comments Links to this post
ကျွန်တှော့ကို ချစ်တဲ့သူတွေ ရှိတယ်။ မုန်းတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။ အမြင်ကပ်သူတွေ ရှိသလို လေးလေးစားစား ဆက်ဆံသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကျွန်တှောကတော့ ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း ကင်းအောင် ကြိုးစားနေထိုင် ပါတယ်။ ချစ်တယ် မုန်းတယ် ဆိုတာ လူတွေကို ပင်ပန်းအောင် လုပ်တဲ့ အရာတွေပါပဲ။ တတ်နိုင်သမျှ အချိန်တှောတှော များများမှာ လူတိုင်းလိုလိုကို ကျွန်တှော အပြုသဘောကနေ ဆက်ဆံပါတယ်။ သူတို့အတွက် ကျွန်တှော အမြဲ ဦးစားပေး စဉ်းစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလူတွေရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်က အံ့ဩစရာ ကောင်းလောက်အောင် ထိတ်လန့်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ လူဟာ ပုံပြင်ထဲက ကုလားအုတ် လိုပါပဲ။ တစ်ခါ အခွင့်အရေး ရပြီးရင် နောက်ထပ် အခါခါ လိုချင်ပါတယ်။ ရတဲ့သူဆီက ပိုလိုချင်ကြပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အမှားအယွင်းတိုင်းမှာ ဆင်ခြေ မဟုတ်တဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ ရှိပါတယ်။ တခါတရံ အမှားအယွင်းတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ အချိန်ယူရပါတယ်။ တခါတရံတော့ လွယ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက် ကောင်းမကောင်း ဆိုတာကို ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက် ပြောပြော ကျွန်တှော လက်မခံပါဘူး။ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းက ဘယ်လောက် ဆိုးတယ်ပြောပြော ကျွန်တှော့အပှေါ ကောင်းတဲ့သူဟာ ကျွန်တှော့အတွက် လူကောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ဂုဏ်တွေ ဒြပ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေပါစေ ကျွန်တှော့ကို မကောင်းတဲ့သူဟာ ကျွန်တှော့အတွက် ရှောင်ကြဉ်ရမယ့် လူပါပဲ။ အလွန်တရာ အားနာတတ်သူ ကျွန်တှောဟာ သူတပါးကို အားနာရင်း အားနာရင်းက ကိုယ် ပြသနာ တွေ အများကြုံတွေ ခဲ့ရတယ်။ ဘယ်တုန်းကမှ ကျွန်တှော မှားခဲ့တယ်၊ မှန်ခဲ့တယ်လို့ မဆုံးဖြတ် မိပါဘူး။ ကျွန်တှောဟာ ကံတရား ကို ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်တှော သူတို့အပှေါ စိတ်ကောင်း ထားနိုင်သရွေ့ ထားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှော စကားပြောရမှာတွေကို တစ်နေ့တခြား ကြောက်ကြောက် လာတတ်ခဲ့တာကတော့ ဘယ်လိုမှ မပြင်နိုင်တော့တဲ့ ဆိုက်ကို တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တှော တိတ်တိတ်နေခွင့် ရပါစေ ဘုရား။
Posted by NLS at 2/01/2006 10:40:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 2/01/2006 10:06:00 AM0comments Links to this post